Хойя Керри: описание, посадка и уход в домашних условиях, фото
Hoya Kerry (sary) mamboly sy mikarakara ao an-trano
Ny fambolena hoyi ao an-trano
Hoya Kerry: Green Heart
Raha te hody any an-trano ianao, ary tsy dia be loatra ilay toerana, dia manoro anao ny hijery ny zavamaniry amin’ny anarana mahazatra hoe Hoya Kerry.
Vao haingana dia tanteraka ny nofiko — nananako hoya kerry. Lazao ahy bebe kokoa momba izany. Fantatro fotsiny fa mitombo tsikelikely ity hoya ity. Aiza no toerana ilainy? Amin’izao fotoana izao dia mijoro eo amin’ny varavarankely mangatsiatsiaka tandrefana (temitra 12 ° Â °), mbola misy drafitra kely foana. Mety hampalahelo azy ve izany?
Anna Fomina, Moskoa
Ny biologista Andrei Babitsky, manam-pahaizana manokana momba ny zavamaniry ao anaty trano sy trano fandraisam-bahiny, ny traikefa momba ny asa — mihoatra ny 10 taona
Hoya kerrii — liana avy any Thailandy, avy any Thailand, solontenan’ny manana Hoya (Noua) izay manana karazany 50. Hoyi dia mitombo ao anaty ala maitso any Azia atsimo, Aostralia sy Polinezia, ary mampiasa hazo ho fanohanana.
Noho ny toetrany mampiavaka azy, ny karazana sasany dia mitombo ao an-trano, indrindra fa ny zavamaniry manimba. Ny mahazatra indrindra dia ny mpamboly voninkazo mamy hoyi fleshy (N. carnosa), tsara tarehy (N. bella), multicolor (N. multiflora) ary ny hafa.
AHOANA NO HANAMPY AN’I KHOY IN HOME CONDITIONS
«Wax ivy, na hoya — zavamaniry tsy mendri-kaja amin’ny fikojakojana sy fikarakarana»
Tamara Zhizhina Bryansk
Tiako ny hoya ary isan-taona dia mahazo zavatra vaovao aho, fa ny voninkazo tsy misy fombafomba sy be dia be indrindra dia ireo karazam-pitiavako taloha — ranom-boasary akoho kely antsoina hoe hoya bell.
Miaraka amin’ny fikarakarana mety, hoya dia mitoloko hatramin’ny lohataona ka hatramin’ny fararano.
Our favorites hoya meaty na ny ivy ary ny bella Mandritra ny taona maro dia mihalava tsara ao amin’ny efitrano, mora foana ny mandefitra rivotra, mahafinaritra ny taona. Mavomamy mamy mofomamy ny voninkazo maniry, ka tsy maintsy avoaka matetika ny efitrano.
Hoya tsy te hiverina na hiova toerana raha oharina amin’ny loharanom-pahazavana, indrindra raha namboarina ny tsimok’aretina (afaka mamoaka tsimok’aretina izy ary tsy maniry). Noho izany, ity hatsaràna ity dia tokony hapetraka eo amin’ny toerana maharitra. Raha tsy ampy ny jiro dia mety tsy maniry na mamerina ny tsimok’aretina efa nambolena mihitsy aza.
Ny fepetra faharoa amin’ny fikarakarana — dia ny fandroana marina. Tsy manondraka zavamaniry aho raha toa ka maina ny tany, raha tsy aorian’ny fanadiovana tanteraka ny lemaka ambonin’ny tany. Sarotra ny miteraka zavamaniry iray, matetika ny zavamaniry dia maty noho ny fongana ny fakany amin’ny hafanana tafahoatra. Mampiasa ranonorana sy rano mafana aho. Ny rano mangatsiaka sy mafy dia mety manodina mavo ary manapaka ny ravina.
Raha misy marika mipoitra sy mamely ny ravina ny hoya, diso ny tsy fahampiana, heverintsika ny anton’ny tsy fahampian-tsakafo. Raha ny marina, ny fihenanam-bolo sy ny famolahana ny ravina hoi dia vokatry ny fandinganana ny fototry ny fototry ny tadidio. Raha mahita ireo soritr’aretin’ny aretin’ny hoi ianao, dia tokony hiverina haingana any amin’ny tany vaovao sy maina, alohan’ny hanesorana sy hametrahana ny fakany ary hitondra azy ireo amin’ny vahaolana fungicide.
Hoyi dia mahafinaritra ny fitsaboana rano, ny fandroana anaty ranomafana mafana dia tena ilainy amin’ny zavamaniry indray mandeha isam-bolana. Ny ravina dia lehibe, hoditra, manangona vovoka betsaka. Talohan’ny fandroana dia napetrako tao anaty kitapo plastika ilay vilany mba tsy hanasa lamba ary tsy handalo ny tany.
Mila fanohanana henjana ihany koa i Hoji. Rehefa tsy tena lehibe ilay zavamaniry, dia ny fanohan-tsakafo no nodiavina mafy, ary nafatotra tamin’ny semicircle ary nijanona tao anaty vilany. Nambolena ilay zavamaniry, ary nilaina ny hampitombo ny fanohanana, mba hisafidy izany fa tsara ny mampifangaro ilay zavamaniry. Ny ladder Bamboo dia lasa fanohanana tonga lafatra, afaka mividy tohatra toy izany any amin’ny fivarotana voninkazo.
Famerenana ny HOYA
Raha misy zaza madinika ao an-trano, dia tsy maintsy mikitika any amin’ny toerana tsy azo atao amin’ny ankizy ny zavamaniry, ny poakan’ny hoya dia misy poizina, raha toa ka misy ifandraisany amin’ny hoditra, membres membres, ny maso dia mety miteraka hoditra.
Hoya meaty dia malaza amin’ny zaridaina. Ny felam-boninkazo miendrika voninkazo, mitovy amin’ireo kintana fotsy na mavokely, ary nandresy ny foko. Hatramin’ny nilazan’i Hoya mazava -, ataovy eo amin’ny varavarankelin’ny varavarankely andrefana.
raha mitodika any atsimo ny varavarankely, dia tokony hotsinjaraina ny zavamaniry ary ho azo antoka fa tsy hikasika ny glas ny ravina, raha tsy izany dia hodorany.
Ao amin’ny penumbra hoya koa dia mitombo tsara, saingy amin’ity tranga ity dia tsy tokony hiandry ny voninkazo ianao.
Ny toerana dia nanome ny voaloboka ho malalaka ary mihamitombo haingana ary ny halavan’ny tongony dia mahatratra metatra metatra. Ny vatosoa dia nahitana rindrina mafy: Ny vadiko dia nanao arika roa mitovy, izay nofonosiko tamin’ny kofehy ho an’ny tontolon’ny fambolena ary napetraka tao anaty vilany iray miampita. Ankoatr’izay dia ilaina ihany koa ny mandefa mivadika amin’ny andaniny iray mankany amin’ny iray hafa.
Manondraka ny zavamaniry amin’ny rano mafana aho: amin’ny fahavaratra — isan’andro, amin’ny ririnina — indray mandeha isan’andro ao amin’ny 3. Ny fandroana loatra no mahatonga ny fotsy hoditra. Hoya i Hoya: «Mora kokoa ny mangatsiaka noho ny tsy fahampian-tsakafo, fa rehefa miala amin’ny tany kosa ny ampahany amin’ny fototry ny fototarazo, dia mandany hery be loatra ilay orinasa amin’ny famerenana amin’ny laoniny.
Mamelona ny liana aho hatramin’ny Martsa ka hatramin’ny Oktobra, miaraka amina zezika mangatsiatsiaka ho an’ny orinasa indostrialy. Indray mandeha isam-bolana dia mirotsaka amin’ny «fomba fandroana» aho: naparitaka tao anaty rano aho ary nanondraka rano marobe avy amin’ny ranomainty avy any ambony. Mamelombelona ilay zavamaniry izany ary manamafy orina ny fototarazo.
BLOODY hoiu «mandro» dia tsy mety!
Ao anatin’ny fepetra tsara, manomboka amin’ny lohataona ny voninkazo ary mifarana amin’ny fararano. Voalaza fa amin’ny fisiana olon-dehibe dia avoakany amin’ny firavaka 50 izy io, saingy amin’ny efatra monja dia midika fa misy zavatra tokony hiezahana. Noho izany dia tsy manala tsimokaretina i hoya, mihena ny rano, tsy mamafy aho ary tsy manova ny toerana misy azy.
Manaparitaka liana aho amin’ny fotoana rehetra amin’ny taona. Esory ny tifototra, atsipazo ao amin’ny «Kornevin», mamaka ao anaty fasika madio madio, mando, voa maina. Mora ampiasaina ihany koa ny tany, fa ny fakan-kazo dia miseho haingana kokoa ao anaty fasika, ary tsy dia mena loatra.
Mba hahatonga ilay zavamanitra ho maotina, dia manamboatra marika maromaro ao anaty fitoeran-javatra iray aho.
Ny felam-boninkazo hoi dia afaka manimba ireo olona mijaly noho ny tsy fahampian-tsakafo, noho izany dia tsara kokoa izy ireo tsy hamboly voaloboka na hamboly azy io ho toy ny orsa afon-katsaka, mametraka ao anaty alokaloka.
Ny ravina dia misy toxins malemy, noho izany dia tsy tokony ho tratran’ny ankizy sy ny biby fiompy ny hoya.
© Author: Valentina MOKINA, Mednogorsk, faritra Orenburg.